Faits-Divers – Page 864 – Midi Madagasikara
Anosizato : Lehilahy maty notsatohan’ny jiolahy antsy
Nandriaka ny rà teny Anosizato, omaly vao maraina. Lehilahy iray manodidina ny 32 taona no fantatra fa maty notafihan’ny jiolahy, tokony ho tany amin’ny 4 ora maraina. Raha ny fampitam-baovao azo dia niaraka nandehandeha tamin’ny vady aman-janany ity raim-pianakaviana ity no nifanehatra tampoka tamin’ny jiolahy mitam-piadiana. Toy ny fanaon’ireo olon-dratsy dia avy hatrany dia nanambana …
Rakotondranisa Lalanirina : Nizara kilalao ho an’ny ankizy tao Ambondromamy
Noho ny fetin’ny krisimasy sy ny faran’ny taona dia nizara kilalao sy nampifalifaly ireo ankizy tao amin’ny kaominina Ambondromamy ditrikan’Ambato-Boeny Rakotondranisa Lalanirina, antsoina hoe Rina ny 29 desambra lasa teo. Izao moa dia tafiditra amin’ny hetsika izay efa fanaony isan-taona ihany fa nosafidiana manokana indray ny tao amin’ny kaominina Ambondromamy tamin’ity indray mitoraka ity. Ankizy…
Ranon’i Masay : Mpanarato roa nosamborina
Manao hetiska amin’izao fotoana izao ny polisy avy ao amin’ny boriborintany faha-8 avy eny Analamahitsy mikasaika ireo olona mandeha manarato eny amin’ny ranon’i Masay. Fantatra izao fa roa ireo mpanjono nosamborina omaly. Nentina niaraka tamin’ny haratony izy ireo. Ity hetsika ity dia mba hamefena ireo maka trondro amin’iny rano maloto iny. Araka ny vaovao voaray,…
← Previous 1 … 863 864 865 … 1 105 Next →